Nei vashandi veGMA vachifara Lara Spencer achange ari padhuze nepasi: Rondedzera - Nhau
Kuru Nhau Macelebs Style Blog
Nei vashandi ve 'GMA' vachifara Lara Spencer achange ari padhuze nepasi: Rondedzera
Lara Spencer arikudzokera ku'Good Morning America, 'zvakaratidzwa muna Kubvumbi 16.
Panzvimbo pekuonekwa paABC mangwanani show zuva rega rega revhiki, vateereri vachamuona chete neChipiri, Chitatu neChina, mishumo kubva Peji Rechitanhatu , Zvakasiyana-siyana uye Mugumo ratidza, sezvo iyo show ichinyanya kutarisa pahutatu hunhu - Robin Roberts, George Stephanopoulos naMichael Strahan. Amy Robach, zvakadaro, akasimudzirwa kuenda ku '20 / 20, 'kwaachatsiva kubuda kwaElizabeth Vargas.
zachary quinto mukomana
Zvinoenderana nenyaya yaApril 17 kubva Peji Rechitanhatu , 'Vashandi vanozorodzwa kuti chirongwa chaLara chiri kudzikiswa,' mumwe weindasitiri akaudza gonyeti reNew York Post. 'Anobata vashandi zvakaipa, anopopotera vanhu uye anoita rimwe basa rekuwedzera kuvanhu.'
Rimwe zuva zvisati zvaitika, Vanhu magazini yakazivisa kuti Lara aida kudzikisira kuitira kuti awane nguva yakawanda yekutarisa mararamiro ake uye zviratidzo zveTV zvaanoita nekambani yake yekugadzira, DuffKat. Lara anochengeta iyo Emmy-inokunda akateedzana 'Flea Musika Flip,' iyo yaakagadzirawo, paHGTV uye, sekureva kwaVanhu, mutungamiri achagadzira maviri mashoo (uye kuitisa imwe) yaakambotengesa kuDiscovery Inc.
'Anoziva kuti haakwanise kuenzanisa' GMA, 'zvese zvirikuuya zviratidziro zveterevhizheni uye DuffKat nekuwanawo nguva yemhuri yake,' sosi yakaudza Vanhu. 'Zvisingataurwe, ari pakati pekuronga muchato!' (Lara uye wemari tech kambani CEO Rick McVey akasimbisa yavo kubatanidzwa muna Ndira mushure memakore maviri ekudanana.)
Victor Hugo / Patrick McMullan kuburikidza neGetty Image
Peji Rechitanhatu, zvakadaro, rinotaura kuti zviwanikwa zveindasitiri zviri kuti kuderera kwaLara hakusi pfungwa yake zvachose uye kuti ari 'kusiyiwa chinyararire,' Post inonyora.
'Lara akanaka pabasa rake asi hazvina kuita se [ratings] zvinokanganisika kana asiri pa [show],' akadaro mumwe mukati akaudza The Post.
ndiani kat von d akaroora kune izvozvi
Kunyange Lara asina kutaura nezvenyaya iyi, mumiriri we 'GMA' akaudza Peji Rechitanhatu kuti hapana mutambo. 'Izvi hazvina musoro. Iye ndiye wekupedzisira timu mutambi. Lara akafunga kudzikisa maawa ake pa 'GMA' kuti atarise kukambani yake yekugadzira. '
Chikonzero chakanyanya kutaurika Kylie Jenner naTravis Scott vakarambana
Zedd anoratidzira chakanyanya chikamu chekufambidzana Selena Gomez
thad luckinbill uye amelia heinle nhau
ndiani wissam al mana
kevin hart nyowani yemotokari
Kim zolciak achiri akaroora
olivia munn uye jordan rodgers
travis scott uye kylie jenner
vana mafirimu muma90s